Faritra Vakinankaratra Miverina misokatra ny Fiangonana, Bar, Karaoke
Miverina misokatra, araka ny fanapahan-kevitry ny CRCO ao Vakinankaratra ny 12 aogositra teo, ny fiangonana, bar, karaoke, toeram-pandihizana, toeram-pisakafoana ao an-toerana.
Na izany aza anefa dia tsy maintsy hajaina mandrakariva ireo fepetra ara-pahasalamana mifandraika amin’ny hahamehana ara-pahasalamana, hoy ny fanazavana. Mijanona amin’ny 5 ora hariva ihany koa ny hetsika rehetra. Ireo toeram-pisakafoana dia tokony hanana « gel désinfectant » isaky ny latabatra ary ireo toeram-pivavahana dia tokony hanaja ny elanelana 1 metatra. Tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 50 isa. Mbola miato hatreto ireo fampisehoana sy hetsika ara-panatanjahantena. Araka ny fanazavan’ny governora ao an-toerana, Vy Vato Rakotovao, moa dia miroso amin’ny fialana tsikelikely amin’ny fihibohana ankehitriny ny faritra iadidiany satria efa tratra ny PIC na ilay fijotson’ny isan’ireo mararin’ity Covid 19 ity. Nohamafisina kosa, raha ny fanazavana hatrany, ny fanaraha-maso ao an-toerana tontosain’ny zandarimaria.